Ankehitriny dia mihamalaza ny sakafon'ny voankazo, ny diany izay mifototra amin'ny fampiasana ny zava-mamy malaza indrindra. Ary raha misy sasany maka eo an-doha, ny hafa mandeha any amin'ny fivarotana ary mividy sausages. Inona marina no ho vokatr'izany ary raha mety ho lany amin'ny sakafo toy izany ianao - vakio ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ireo izay manana fahalalana kely farafahakeliny momba ny sakafo ara-pahasalamana, dia mahatsiravina amin'ny anaran'ny sakafo. Ankoatra izany, amin'ny salohim-bozaka miisa 450-500 isaky ny 100 grama - ary izany no antsasaky ny fepetra isan'andro ho an'ny tovovavy mamono.
Sakafo amin'ny saosisy
Ny tranonkala samihafa isan-karazany dia manolotra karazan-tsakafo samihafa - hijery ireo dikan-teny malaza indrindra isika.
Ny iray amin'ireo sakafo dia miombon-tsakafo kely: isaky ny 2.5-3 ora dia tokony hihinana sandwich miaraka amin'ny saosisy. Ary noho izany - 10 - 14 andro. Misy safidy maromaro - io sakafo io amin'ny siny voamaina na amin'ny sausage nendasina.
Misy karazana siramamy sy siramamy koa:
Breakfast - tea.
Ny sakafo maraina faharoa dia atody.
Sakafo - Sakafo na voankazo - 200 g.
Sakafo hariva androany - 100 grama sigara.
Ny tsindrona faharoa dia 250 g tsy misy fofona fary tsy misy fatrany.
Fanaovana sakafo - vera 1% kefir.
Io sakafo io koa dia tokony hipetraka 10 andro. Lozam-po kokoa noho ny teo aloha izy io, saingy tsy manimba ny vatany izany.
Azo atao ve ny mihinana saosisy amin'ny sakafo?
Raha tsy nividy amboadia ambioka sy voankazo ianao, ity vokatra ity dia azo sokajiana ho tsy azo antoka. Vakio ny soso-kevitra: ankoatra ny hena dia misy tavy, loko marevaka, tsiro, fanatsarana ny tsiranoka, proteinina (izay mazoto mitovitovy amin'ny GMOs ) sy ny maro hafa koa. Ary alaivo sary an-tsaina fa ity cocktail nokleary misy tsindrona anarana mampiahiahy ity no lasa sakafo maina ho an'ny ampahatelon'ny volana!
Ny voankazo - ny vokatra dia tena tsara tarehy ary tsy misy foana. Na ireo tranonkala izay mamoaka ireo karazan-tsakafo tsy misy dikany miaraka amin'ny sonia "tena mahomby!" Aza hadino ny manondro fa mampidi-doza io sakafo io ho an'ny olona manana olana amin'ny trakta, ny aty ary ny voan'ny gastrointestinal (ary koa mety hamaha izany olana izany). Ankoatr'izay, ny habetsahan'ny fanampiana ara-tsimika dia mety hampitombo ny fihanaky ny alahelo.
Famaranana : mahasalama ny fahasalaman'ny ronono. Ankoatr'izay, rehefa avy nipetraka nandritra ny 10 andro amin'ny fihinanana sakafo toy izany miaraka amin'ny fanamafisana ny tsirony, dia hanimba ny tsiron'ny natiora ianao, ary ny hena mahandro na boaty dia toa tsy manitra anao. Ny fanandramana toy izany eo amin'ny vatanao dia tsara kokoa ny tsy mametraka, indrindra satria ny sakafo mahasalama dia manome ny vokatra fohy.
Amin'ny algérie mahavariana
Sakafo rehefa nesorina ny appendicitis
Ny fiharian-karena ambany kôbinina amin'ny type diabetes mellitus
Ny karaman'ny Inna Volovichova amin'ny andro
Sakafo ho an'ny aty - sakafo ho an'ny isan'andro
Ny sakafo amin'ny fikajiana ny vavony
Sakafo miaraka amin'ny fihenan'ny aty
Sakafo "10 kg nandritra ny 10 andro"
Diabetika isan'andro isan'andro
Ny fihinanana koban'ny fatiantoka mandritra ny 5 andro
Hoatran'ny ahoana ny Nastya avy amin'ny Voronin?
Diary avy amin'i Aliana Gobozova
Ny taom-baovao ny maraina amin'ny gardens - tarika fanomanana
Ny fomba fikarakarana mofo - hevitra mahaliana ho an'ny fanangonam-bokatra
Hevitra, lanjany sy lanjany ho an'ny Dakota Johnson
Ny tsingerintaona nahaterahan'i Miley Cyrus dia niresaka momba ny fanomezam-pahasoavana mahafinaritra avy amin'i Liam Hemsworth, niteraka fampielezan-kevitra momba ny maha-bevohoka azy
Ahoana no fanaovana fefy anao?
Kim Basinger sy Mitch Stone mandany ny fialantsasatra any Sisila
Ny alèin'ny zaza vao teraka
Liam Payne nihaona tamin'ny Mpanjakavavy Elizabeta II sy ny Prints Harry tao amin'ny Mpitarika Young Queen
Karpony nipoitra tao anaty lafaoro
Duphaston miaraka amin'ny cyst ovara
Volo vita amin'ny tavoahangy plastika
Ahoana no mahatonga ny nifiny amin'ny nify?
Green kafe ho an'ny fahavoazana
Ahoana ny fomba fanaovana kongona - teknika ary manondro
Brazolika avy amin'ny kofehy lehibe
Fashion Scarves 2012
Ahoana no nahalavoan'i Ani Lorak taorian'ny nahaterahany?
Supermodel Adrian Limu ... nanoratra!